FAMPITAM-BAOVAO | Primature
Lapan’i Mahazoarivo, 14 janoary 2022 – Ny fiadidian’ny Praiminisitra dia mampahafantatra fa tsy marina ny filazàna miparitaka amin’ny tambazotran-tserasera sasantsasany, fa misy rohim-pihavanana na olona akaiky ny Praiministra NTSAY Christian ireo olona voasaringotra amin’ny fanondranana antsokosoko volamena 49 kg izay voasambotra tao Moroni, Comores.
Noho izany dia mila mailo sy mamakafaka hatrany ny vaovao eny amin’ny tambanjotran-tserasera ny rehetra ary miandry am-pitoniana ny valin’ny fanadihadiana ataon’ny fitondram-panjakana ahitana ny marina sy ny mangarahara mikasika ity raharaha ity.
Ady ataon’ny fitondram-panjakana ny hamongorana tanteraka ny fanondranana volamena an-tsokosoko sy ny tambazotra rehetra mifandraika amin’izany. Hatolotra ny fitsaràna mahefa izay rehetra voatonona amin’ity asa ratsy ity, na iza izy na iza.
← Conseil du gouvernement du Mercredi 12 janvier 2022
« CFIM »
Fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny Faritra